China Amafutha flling umshini umugqa ifektri kanye nabaphakeli | Sawubona
Lo mugqa womshini wokugcwalisa ungowokugcwalisa uketshezi oluphezulu lwe-viscosity noma okokusebenza okufana no-oyela, ujamu njll. Lokhu kungumugqa wokugcwalisa oqondile, ongahlanganiswa netafula lokudla, umshini wokugcwalisa, umshini wokubhala, iphrinta yosuku, umshini wokulebula njengomugqa owodwa ophelele.
Inkokhelo Imigomo: I-TT, L / C.
Umugqa Wokugcwalisa Umshini Wokugcwalisa Amafutha
Umshini Wokugcwalisa Amafutha ngokuzenzakalela
Amafutha, ukhilimu, ujamu, okokuhlanza, nezinye izinto ezinomsoco ophuzayo, ukudla, amakhemikhali, isibulala-zinambuzane, ezokwelapha, impahla yezimboni, nezinye izimboni eziningi.
● Ivolumu enembile: Uhlelo lwe-Servo luyasetshenziswa ukuqinisekisa ukunemba okuphezulu kwevolumu yokugcwalisa.
● Ijubane eliguquguqukayo: Ijubane lokugcwalisa lizohamba kancane uma usondela kumthamo ohlosiwe.
● Ukugcwaliswa Okucwilisiwe: Ukugcwalisa imibhobho kuzongena kuketshezi ngenkathi kugcwaliswa ukugwema ukukhihliza amagwebu nokuchitheka.
Ukulungiswa Okuhlakaniphile: Udinga kuphela ukushintsha imingcele kusikrini sokuthinta ukuze uthole ivolumu yokugcwalisa ehlukile noma ukulungiswa okuhle. Onke amakhanda okugcwalisa angashintshwa. Ine-interface yomsebenzisi futhi kulula ukuyisebenzisa.
● Ukungcoliswa komoya: Uhlaka olukhulu lomshini lwenziwe ngensimbi engagqwali esezingeni eliphezulu engu-304 enomphumela omuhle wokulwa nokubola. Zonke izingxenye zokuxhumana zenziwe ngensimbi engagqwali engu-316L. Umshini wonke uvalwe ngensimbi engagqwali nengilazi ethintiwe ukuze kuvinjelwe ukuvuza kwegesi kadoti.
Umshini we-Capping Machine we-Twisting Twisting
Lolu hlobo lomshini wokuqhafaza lusetshenziselwa kabanzi ukufakwa kwamabhodlela ayindilinga, ayisikwele, noma ayizicaba ane-cap cap.
Umshini Welebula Wokufaka Izitika
Lolu hlobo lomshini wokufaka ilebula lusetshenziselwa kabanzi ukufaka amalebula emabhodleleni ayindilinga anezitika zokunamathela. Ilawulwa yi-PLC futhi iqhutshwa yi-servo. I-interface yomsebenzisi-friendly yenza kube lula ukusebenza.
1. Isakhiwo esizimele sokugoqa ilebula se-electromechanical sivumelanisa izinqubo zokugudluza nokulebula, ngaleyo ndlela kuthuthukiswe ukunemba kokulebula.
2. Kunemiyalo emshinini ekhombisa ukuthi ifilimu yelebula ikholisa kanjani ukuze ukushintsha ifilimu kube lula.
Langaphambilini I-Pasteurizer & Sterilizer
Olandelayo: Umugqa womshini wokugcwalisa uwoyela obalulekile